» पार्टी फुटे माओबादी र एमाले को नाम लिएर फुट्दैन! पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड पार्टी फुटे माओबादी र एमाले को नाम लिएर फुट्दैन! पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड – हाम्रो खबर
पार्टी फुटे माओबादी र एमाले को नाम लिएर फुट्दैन! पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड
2020, November 13th, Friday
काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी विभाजन हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्र भएर नफुट्ने बताएका छन् । पार्टीका युवा, विद्यार्थीहरूसँगको भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी फुटबाट जोगाउन अधिकतम कोसिस गरिरहेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्ति र कार्यशैली बाधक बन्न सक्ने जिकिर गरेका हुन् ।
बुधबार अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न अनेरास्ववियूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङसहितका केही युवा–विद्यार्थी खुमलटार पुगेका थिए ।
“यसपटक प्रधानमन्त्री ओली नसच्चिए । उहाँले विगतका कमीकमजोरी नसच्याए वारपार हुने अवस्था छ । उहाँसँग पुनः सम्झौता हुने अवस्था छैन,” प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै अनेरास्ववियूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले बाह्रखरीसँग भने, “पार्टी फुट्न नदिन हाम्रो अधिकतम कोसिस छ । धीरता र सहनशीलता पनि छ ।”
कम्युनिस्ट पार्टी फुट्न दिनु हुँदैन, अरूलाई पनि एकीकरणको प्रवाहमा समेट्नुपर्छ र समाजवादको आकाङ्क्षा पूरा गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी, दायित्वबारे बुझ्दा ओलीले त्यसलाई कमजोरी ठानेको प्रचण्डको गुनासो थियो । फेरि पनि पुरानै कार्यशैलीलाई ओलीले निरन्तरता दिए पार्टीले लगाम कस्ने पनि प्रचण्डको भनाइ थियो ।
“कथं पार्टी विभाजन भए हिजोको एमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र भएर फुट्दैन, त्यो बन्न सम्भव पनि छैन,” प्रचण्डले युवा–विद्यार्थीलाई भने, “सकभर पार्टी फुट्न नदिने नै हाम्रो चाहना र प्रयास हो । ओलीजीहरू पार्टीको बैठक पनि नबस्ने, निर्णय नमान्ने हुँदा, मूल्य चुकाएर भए पनि पार्टीलाई विधि, पद्धतिमा चलाउनै पर्छ । अराजकता र दण्डहीनता नसने भन्ने कुरामा जाँदा ओलीजीले पार्टी फुटाउन सक्नुहुन्छ । उहाँहरूको आन्तरिक तयारी पनि तीव्र छ ।”
तर, ओलीलाई पार्टी फुटाएर जनताको चाहना, इच्छा, कार्यकर्ताको आकाङ्क्षाबाट भाग्न नदिने प्रचण्डको स्पष्टोक्ति पनि रहेको तामाङको भनाइ छ ।